मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नदिने उपेन्द्र यादव चेतावनी, के भन्छन बाबुराम भट्टराई ? — Sanchar Kendra
मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नदिने उपेन्द्र यादव चेतावनी, के भन्छन बाबुराम भट्टराई ?
सिन्धुली । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने चेतावनी दिएका छन् । अध्यादेश खारेज नहुँदा दलहरुलाई अस्थिर बनाउने यादवको भनाइ छ ।
सिन्धुलीमाडीमा मंगलबार संचारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन दलहरु लागेको बताए । उनले भने, ‘तत्काल केही गर्नु परेको आधारमा अध्यादेश ल्याइएकाले खारेज नहुँदा दलहरु टुक्रिने सम्भावना रही लोकतन्त्रलाई नै खतरा उत्पन हुनसक्छ ।’
जसपाको संगठन सुदृढीकरण तथा जनजागरण (सुज) अभियान कार्यक्रममा अध्यक्ष यादवसहित बाबुराम भट्टराईको पनि उपस्थिती रहेको छ । यस बिषयमा बाबुराम भट्टराई भने मौन छन् । तर भट्टराईले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्परिसट (एमसीसी) अनुमोदन गर्दा नै राष्ट्रको हित हुने बताएका छन्।